ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားသူများ ၊ အခွင့်အရေး ရှိကြသူများ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားသူများ ၊ အခွင့်အရေး ရှိကြသူများ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ဥရောပ ဇုန် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ပြင်သစ် နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ တို့ဟာ နိုင်ပွဲ ကိုယ်စီ ရရှိ ခဲ့ကြပြီး ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို တိုက်ရိုက် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင် သွားခဲ့ ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ဟာ ကာဇက်စတန် ကို ၈ ဂိုးပြတ် သွင်းပြီး အနိုင် ကစားခဲ့ပါတယ် ။ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူးလေး ဘာပေ တဦးတည်းက ၄ ဂိုး သွင်းခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဘာပေ အတွက် ပထမဆုံးသော လက်ရွေးစင် ဟက်ထရစ် လည်း ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ကတော့ အက်စ်တိုးနီးယား ကို ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ကစား သွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ၊ နော်ေ၀ နဲ့ တူရကီ တို့ရဲ့ အုပ်စု ကတော့ နောက်ဆုံးအချိန် အထိ အဆုံးအဖြတ် ခံယူ ကြရတော့မှာပါ ။
ဟာလန်း မပါတဲ့ နော်ေ၀ ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ လတ်ဗီးယား ကို ဂိုးမသွင်း နိုင်ဘဲ သရေ ကျခဲ့ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် ကလည်း မွန်တီနီဂရိုး ကို ဒီပိုင်း ရဲ့ ဂိုးတွေနဲ့ ဦးဆောင်နေပြီးကာမှ ပွဲပြီးခါနီးမှ ၂ ဂိုးပြန်ပေး ခဲ့ရပြီး သရေ ကျသွားခဲ့ ပါတယ် ။ တူရကီ ကတော့ ဂျီဘရော်တာကို ၆ ဂိုးပြတ် အနိုင် ကစား သွားခဲ့တာပါ ။
လီဗာပူး ဟာ ဘာစီလိုနာ တောင်ပံ ကစားသမားလေး ဒမ်ဘီလီ ကို စိတ်ဝင်စား နေဆဲ လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
PSG နဲ့ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း နီကိုလပ်စ် အနယ်ကာ ကတော့ အတိတ် က အောင်မြင်မှုတွေ နဲ့ ရှင်သန် နေတယ်ဆိုတာဟာ ဘောလုံးမှာ မရှိပါဘူးလို့ ပြောဆိုရင်း ဆာဂျီယို ရာမိုစ့် အနေနဲ့ PSG မှာ နေရာရဖို့ ထိုက်တန်ကြောင်းကို သက်သေပြဖို့ တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ အာဖရိက ဇုန် ပွဲစဉ်တခု ဖြစ်တဲ့ အီဂျစ် ရဲ့ ပွဲစဉ် မှာ ပရိသတ်တွေ ဟာ အီဂျစ် တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလာ ကို ပွေ့ဖက် နှုတ်ဆက်ဖို့ ကွင်းထဲ ကို ဝင်ရောက် မှုတွေကြောင့် ၃ ကြိမ် တိုင်တိုင် ပွဲနားခဲ့ရတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် အမျိုးသမီး အသင်းဟာ မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ လန်ဒန် ပြိုင်ဘက် စပါး နဲ့ ၁ ဂိုးစီ သရေ ကျခဲ့တာကြောင့် ဒီရာသီ ပထမဆုံး အမှတ်လျော့တဲ့ ပွဲ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာတဲ့ စတီဗင် ဂျရတ် ဟာ အသင်းဟောင်း ရိန်းဂျားစ် ရှေ့တန်းလူ ရိုင်ယန် ကန့် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ဂျရတ် ဟာ ၂၀၁၉ တုန်းက ရိုင်ယန်ကန့် ကို လီဗာပူး ကနေ ရိန်းဂျားစ် ထံ ပေါင် ၇.၅ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရိန်းဂျားစ် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ နေရာကိုတော့ နယ်သာလန် နည်းပြ ဂျီယို ဗင်နီ ဗန်ဘရွန်ခရော့စ် က ရယူဖို့ သေချာသလောက် ရှိနေပြီး ယမန်နေ့က လန်ဒန် ကို စာချုပ် ကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့ ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ လက်တကမ်း အလိုကို ရောက်နေတဲ့ အင်္ဂလန် နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် ကတော့ ကမ္ဘာ့ ဖလား ကျင်းပမယ့် ကာတာ မှာ တည်းခို နေထိုင်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်မယ့် နေရာကို ကြိုတင် ရွေးချယ် နေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြသစ် ဇာဗီ ကတော့ လီဗာပူး ကို ရောက်နေတဲ့ ဘာစီလိုနာ အကယ်ဒမီ ကစားသမားဟောင်း သီယာဂို အယ်ကန်ထရာ ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဇာဗီ ဟာ ကာတာ က သူ့ရဲ့ အသင်းဟောင်း အယ်လ်ဆတ် နည်းပြ ရာထူး အတွက် ဘာစီလိုနာ မှာ အတူ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အာဂျင်တီးနား နောက်ခံလူ ဂျာဗီယာ မာရှေယာနို ကို ထောက်ခံ ပေးထားတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ဇန်နဝါရီမှာ တိုက်စစ်မှူးသစ် တယောက် ကို အငှား နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားဖွယ် ရှိပြီး ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး တီမို ဗာနာ ကို ကမ်းလှမ်း ကြည့်ဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး မှာ ကစားခွင့် နည်းပါး နေတဲ့ ဟာကင် ဇီယက်ချ် ကို ဒေါ့မွန် အသင်းက စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းကတော့ လက်စတာ ကွင်းလယ်လူ အန်ဒီဒီ ကို စောင့်ကြည့် ထားပြီး ကက်စမဲရိုး ရဲ့ နေရာ အတွက် ရေရှည် အစားထိုး နိုင်မယ်ဆိုပါက ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစား သွားမယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article အိုးထရပ်ဖို့ဒ်ကနေ တက်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာရန် ယူနိုက်တက်စတားတစ်ဦးကို တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဘော့စနစ်
Next Article “သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်” – အဆုံးအဖြတ်ပွဲမတိုင်ခင် ရိုနယ်ဒို ကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ မီလန်ကိုဗစ်